Maninona ny olona miverina amin'ny seranam-piaramanidina atsimo andrefana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Maninona ny olona miverina amin'ny seranam-piaramanidina atsimo andrefana
Ny vidin'ny Southwest Airlines dia nitombo avo roa heny hatramin'ny nahavoa ny ambany indrindra tamin'ny volana martsa 2020, ary tamin'ny volana farany tamin'ny 2020 dia nidina 13% ho an'ny taona. Tonga izany na dia nihena aza ny dia an-habakabaka tany Etazonia 65% isan-taona arakaraka ny TSA. Samy hafa ny fahatsapan'ny mpanjifa momba ny Southwest, na ny serivisy ho an'ny mpanjifany na ny traikefa an-dalambe sy ivelan'ny fiaramanidina. Manolotra dingan-dàlana tsara izy ireo ary laharana voalohany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny dia an-trano izy ireo amin'ny taona 2020. Avelan'ny orinasa hitondra kitapo roa amin'ny sidinao ianao ho isan'ny vidin'ny tapakila ary hialana amin'ny sarany seza fanampiny amin'ny fisavana. Tsy mahagaga raha nifidy ilay marika famantarana ny tsena LUV ny orinasa.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra
Airtravel dia traikefa amin'ny serivisy. Ny fandehanana amina toerana iray mankany amin'ny toerana manaraka dia soa aman-tsara indrindra, saingy, ny fanandramana hahatongavana any no andoavanao vola. Tena zava-dehibe ny serivisy ho an'ny mpanjifa indrindra rehefa tsy mandeha tsara ny raharaha. Ireo entana mahazatra toy ny fahataran'ny toetr'andro na ny olana ara-mekanika dia zavatra niainantsika rehetra nandalo, fa rehefa miaraka amin'ny fianakavianao amin'ny fialan-tsasatra ianao dia rehefa mila ny serivisy ho an'ny mpanjifa indrindra ianao.
Mety hampahory ny manidina satria hisy ny olana izay tsy voafehinao. Azo foanana ny sidina ary mety ho very ny sakaosy izay midika fa zava-dehibe ny fisafidianana kaompaniam-pitaterana manana departemanta serivisy ho an'ny mpanjifa matanjaka. In 2020, magazine fitsangatsanganana sy fialamboly nisafidy ny Southwest Airlines ho Worlds Best ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny kaompaniam-pitaterana an-toerana amerikana.
Southwest Airlines dia manana politika fanafoanana tena malefaka. Amin'izao fotoana izao dia mamela ny mpanjifa hanafoana ny famandrihana hatramin'ny 30-minitra alohan'ny fiaingan'ny sidina. Ny vola avy amin'io fanafoanana io dia azo alaina avy hatrany ho an'ny bola amin'ny dia manaraka. Na dia maro aza ireo zotram-piaramanidina izay nanome politikam-panafoanana nandritra ny areti-mandringana, ny Southwest dia nialoha ny fiolahana izay nahatonga ny mpanjifany ho afa-po tokoa.
Misokatra ny seza
Ny iray amin'ireo dingana tsy manam-paharoa momba ny traikefa Southwest dia ny fizotry ny fiantsonana. Satria tsy misy kabine kilasy voalohany na seza tiana, dia nitifitra mitovy ny olona rehetra amin'ny fahazoana ny toerana tiany. Afa-tsy ireo laharam-bondrona sy ireo fivoahana vonjy taitra dia tsy afaka mividy seza manokana mialoha ianao. Raha manandrana miteraka karama avy amin'ny seza manokana ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa, izay mamorona firafitry ny kilasy, ny Southwest Airlines dia miompana amin'ny mpanjifa hafa, izay liana amin'ny fahatsapana tsara momba ny fizotry ny fiakarana sy ny seza azo averina. Seho iray lehibe atolotra ny "Fizarana EarlyBird”Izay manome antoka anao ny toerana fijanonana taloha kokoa amin'ny sarany kely. Ny toerana ipetrahanao dia mifototra amin'ny fotoana nanamarihanao ny sidina nanomboka 24 ora alohan'ny niainganana.
Misidina maimaim-poana ny kitapo ary mahalana izy ireo no very
Na dia manandrana "nikela sy dime" aza ny seranam-piaramanidina maro hafa, dia mamela malalaka ny kitapo hanidina i Southwest. ny manidina tsy misy vidiny ny kitapo roa voalohany. Tsy mila manana carte de crédit manokana na isa valisoa maromaro ianao, fa hisidina maimaimpoana ny kitaponao arakaraka ny vidin'ny tapakilao. Ankoatr'izay, Southwest dia manana iray amin'ireo rakitsoratra tsara indrindra momba ny kitapo very.
Ny pasipaoro mpiara-dia amin'i Southwest Airlines dia iray amin'ireo tombontsoa tsara indrindra amin'ny indostria. Ny Companion Pass dia mamela anao hitondra namana voatondro na mpikambana ao amin'ny fianakaviana amin'ny sidina Southwest rehetra ataonao. Mila mandoa ny hetra sy ny sarany fotsiny ianao, toa anao amin'ny tapakila loka. Ity perk dia mihatra amin'ny tapakila roa karama sy valisoa. Ity tombony ity dia tsy tonga lafo. Mila mahazo vola ianao Isa marobe 125,000 na mandray sidina tokana miisa 100 mahafeno fepetra amin'ny taona kalandrie hahazoanao ny Companion Pass. Azonao atao ihany koa ny mahazo isa amin'ny alàlan'ny carte de crédit Rapid Rewards, ao anatin'izany ny bonus fisoratana anarana, ny mpiara-miantsena sy ny mpiara-misakafo, ao anatin'izany ny fisakafoanana Rapid Rewards, ary koa ireo mpiara-miasa ao an-trano sy ao amin'ny fomba fiainana.
Ny vokatra farany dia ny Southwest dia manohy manaporofo fa izy no laharana voalohany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Satria ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia orinasam-panompoana, azonao atao ny mahita ny antony manohy miverina any Atsimo Andrefana ny mpanjifa mba hivezivezy. Izy ireo dia misoroka ny fiampangana an-tsokosoko toy ny seza tian'ny olona. Ny orinasa dia mamela anao hitondra kitapo roa amin'ny dianao tsy misy sarany fanampiny izay mahafinaritra ny maro. Masinina misy menaka voahosotra tsara ny fomba fiakarana ary manampy anao hiala haingana amin'ny tany. Ankoatr'izay, ny pass pass dia iray amin'ireo tolotra tsara indrindra amin'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka. Mandeha any amin'ny toerana itodiana manerana an'i Etazonia i Southwest ary izy no safidy voalohany ho an'ny maro. Ny vidin'ny fifanakalozana tahiry dia mitohy miohatra maro amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa, na eo aza ny fihenan'ny 50% ny vidiny mandritra ny volana martsa 2020.